ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသိသင့်သော..အမှတ်မှားနေသောအကြောင်းအရာအချို့ - Kanaung News
1-ဘုရားကို ပရိနိဗ္ဗာန်စံခိုင်းတာ မာရ်နတ်အကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်၊မာရ်နတ်သေးသေးလေးတဲ့မာရ်နတ်ကြီးကသာစံခိုင်းရင်ချက်ချင်းစံရမှာဆိုတာဟုတ်လား ??
2-မာရ်နတ် ခိုင်းလို့ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတာလား၊ ဝက်သားစားလို့လား ??
4-မာရ်နတ်ကို နှောင့်ယှက်လို့မရအောင် ဘုရားကဘာလို့ တန်ခိုးနဲ့ မတားလဲ ??
5-ရှင်ဥပဂုတ်ကမာရ်နတ်ကို ဆုံးမတယ်ဆိုတာ ဟုတ်လား ??
မာရ်ရဲ့အကြောင်းလေး အရင်ရှင်းရအောင် မာရ်ဆိုတာ မာရဆိုတဲ့ ပါဠိကနေလာတာ မာရဆိုတာ သေခြင်း၊ သေစေခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။မာရ်ဆိုတာ သေတတ်တဲ့သဘော သေအောင်သတ်တတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာ။
ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုခင် ၃လ အလိုမှာ တစ်ခါလာတောင်းပန်တယ်။အရှင်ဘုရား အဋ္ဌမသတ္တာဟမှာပြောခဲ့တဲ့ငါဘုရားမှာ ဘိက္ခု၊ ဘိက္ခုနီ၊ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာ ပရိသတ် လေးပါးတို့ကတရားတွေကို
– ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မဆောင်ရွက်နိုင်ကြသေးဘူးဆိုလျှင်
– သူတပါးကို မဟောပြောနိုင်သေးဘူးဆိုလျှင်
– ဆန့်ကျင်ဘက်လာပြောလို့မှ မနှိမ်နင်းနိုင်သေးဘူးဆိုလျှင်ဂုဏ်အရည်အချင်းမပြည့်သေးသရွေ့ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုသေးဘူးဆိုတဲ့စကား မှတ်မိပါသလားဘုရား။
ယခုအခါတွင် အရှင်ဘုရား၌ပရိသတ်လေးပါးမှာ ဘိက္ခုပရိသတ်သည် ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်မှတ်သား၍ သူတပါးတို့ကိုလည်း ဟောပြောနိုင်ပါပြီ။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောလာသူတို့ကိုလည်း တရားသဖြင့်နှိမ်နင်းပြီး အကျိုးအကြောင်းနှင့်တကွ တရားကို ဟောပြနိုင်ပါပြီ…ပရိနိဗ္ဗာန်စံယူရန် အချိန်အခါ သင့်ပါပြီ။ ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူပါတော့ဘုရား။
ဥပါသကာပရိသတ်သည် ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်မှတ်သား၍ သူတပါးတို့ကိုလည်း ဟောပြောနိုင်ပါပြီ။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောလာသူတို့ကိုလည်း တရားသဖြင့်နှိမ်နင်းပြီး အကျိုးအကြောင်းနှင့်တကွ တရားကို ဟောပြနိုင်ပါပြီ
ပရိနိဗ္ဗာန်စံယူရန် အချိန်အခါ သင့်ပါပြီ။ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူပါတော့ဘုရား။
ဥပါသိကာပရိသတ်သည် ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်မှတ်သား၍ သူတပါးတို့ကိုလည်းဟောပြောနိုင်ပါပြီ။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောလာသူတို့ကိုလည်း တရားသဖြင့်နှိမ်နင်းပြီး အကျိုးအကြောင်းနှင့်တကွ တရားကိုဟောပြနိုင်ပါပြီပရိနိဗ္ဗာန်စံယူရန် အချိန်အခါ သင့်ပါပြီ။ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူပါတော့ဘုရား။
ဒီလိုမျိုး ပြည်စုံပုံပြပြီး ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ လျှောက်တယ်။ဒီတော့ ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ လာလျှောက်တာ ဒီမာရ်နတ်ပါပဲ။ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ့်ကိစ္စက ဘုရားရဲ့ကိစ္စသာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူစံခိုင်းလို့မှလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာ ဘုရားရဲ့သက်တော်ဟာ ၈၀အတွင်းကိုချဉ်းနင်းဝင်ရောက်နေပြီ။၈၀ ပြည့်ဖို့ ၃လပဲ လိုတော့တယ်။ ဘုရားရှင်တိုင်းဟာ သက်တမ်းရဲ့ ၅ပုံ ၄ပုံမှာပဲ ပရိနိဗ္ဗာန်စံလေ့ရှိတယ်။
ဘုရားရှင်ရဲ့ ပစ္ဆိမသာဝကဖြစ်တဲ့ သုဘဒ္ဒပရဗိုဇ်ကလည်းနောက်သုံးလနေမှ ဉာဏ်ရင့်မယ်။တရားဟောလို့ရမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ ၇လတုန်းကသေလောက်တဲ့ သွေးဝမ်းသွန်ရောဂါကို အာယုပါလကဖလသမာပတ်နဲ့၁၀ လတာထိန်းတာကလည်း နောက်သုံးလဆို ပြည့်ပြီ။ပရိနိဗ္ဗာန်စံယူလောက်အောင် ပြင်းထန်တဲ့ သွေးဝမ်းသွန်ရောဂါဟာလည်း ပြန်ပေါ်တော့မယ်။
ပြန်ပေါ်လာတဲ့ ရောဂါကို အာယုပါလကဖလသမာပတ်နဲ့ ပြန်ထိန်းချင်လည်းရတယ်။မထိန်းတော့ပဲ အနုပါဒိသေသ ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံလိုက်လည်းရတယ်။အရင်က ဖလသမာပတ်သုံးပြီး ရောဂါကိုထိန်းတာဟာ ပစ္ဆိမသာဝကကိုတရားဟောဖို့ မမီမှာစိုးလို့။ အခုကပစ္ဆိမသာဝကကိုတရားဟောမီတဲ့အတွက် မထိန်းတော့ဘူး ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မယ်။ဒီတော့ ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတာ မာရ်နတ်ကြောင့်လည်း မဟုတ်ဘူး သူကရမဒ္ဒဝကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။
(သူကရမဒ္ဒဝကို ဝက်သားမဟုတ်ကြောင်း ကျမ်းများစွာတို့မှာရှင်းလင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ပို့စ်နဲ့မဆိုင်လို့ မရေးတော့ပါဘူး)မာရ်နတ်ကလည်း လာလာနှောင့်ယှက်နေတာ ဒီတစ်ယောက်တည်းပါ။ပရိနိဗ္ဗာန်မစံခင် ၁၀လ အလို (အာယုသခါင်္ရမလွှတ်ခင် ၇လ အလို) ကတည်းကပရိနိဗ္ဗာန်စံစရာ ရောဂါဝေဒနာ သွေးဝမ်းသွန်မှု ဖြစ်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တန်ပြီမို့ ပရိနိဗ္ဗာန်စံကြောင်း သိလောက်ပါပြီ။
၁နဲ့ ၂ ရဲ့ အဖြေ ပြီးပါပြီ
[[သူကရမဒ္ဒဝဟာ သွေးဝမ်းသွန်စေခဲ့တာမဟုတ်ပဲသွေးဝမ်းသွန်လို့ လျော့သွားတဲ့အာဟာရ၊ဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့ခွန်အားတွေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာပါ။အကယ်၍သာ သူကရမဒ္ဒဝကို ကြိုတင်မှီဝဲထားခြင်းမရှိရင်သွေးဝမ်းသွန်ပြီးချက်ချင်းတောင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားနိုင်ပါတယ်။ခုတော့ သူကရမဒ္ဒဝရဲ့အာဟာရကကုသိနာရုံအထိခြေကျင်ကြွသသွားနိုင်ပါသေးတယ်။သူကရမဒ္ဒဝကို သုံးဆောင်မိလို့ အာဟာရရှိပြီး နေနိုင်တာကို သူကရမဒ္ဒဝကြောင့်သွေးဝမ်းသွန်တယ်ထင်ရင်တော့ မှားပါလိမ့်မယ်။ဒီသူကရမဒ္ဒဝဟာ ဘုရားမဖြစ်ခင် အာဟာရဖြည့်တင်းတဲ့ သုဇာတာရဲ့ဃနာနို့ဆွမ်းလိုပဲအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ ]]
ဒီတော့ အကြောင်းစုံညီနေပြီဖြစ်တဲ့နောက် ၃လကို ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မှာဖြစ်လို့မာရ်နတ်က ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့ လာလျှောက်ချိန်မှာ ဘုရားက -မာရ်နတ်ရေ ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမယ့်ကိစ္စမှာ မင်းကြောင့်ကြစိုက်မနေနဲ့တော့နောက် ၃လနေရင် ငါဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့မယ်။ဒီလိုပြောပြီး အာယုသခါင်္ရကိုလွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီလို အာယုသခါင်္ရကို လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကြောက်စရာကောင်းကြက်သီးမွေးညှင်းထလောက်အောင် မြေငလျင်အကြီးအကျယ်လှုပ်တယ်။မိုးတွေချုန်း လျှပ်စီးတွေ လက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်တော့ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့ နီးကပ်ပြီမို့နှစ်သက် ဝမ်းမြောက်တဲ့ ပီတိနဲ့ ဥဒါန်းကျူးတော်မူပါသေးတယ်။
လောကသုံးဘုံ အလုံးစုံကို အကုန်သိမြင် ဘုရားရှင်သည် အကျိုးတရား အစားစား၏ ဖြစ်ပွားရာလည်းဖြစ်ထသော အသစ်တဖန် ဘဝကိုစီမံတတ်သည်လည်း ဖြစ်ထသော ချိန်ခွင်ပမာဉာဏ်ပညာဖြင့် ကောင်းစွာပိုင်ပိုင် မချိန်နိုင်သော မဟဂ္ဂုတ်ကံကိုလည်းကောင်း မဂ်အရဟတ္တ ရတုံးကပင် လုံးဝမငဲ့ စွန့်လွှတ်တော်မူခဲ့ပြီ၊ သူရဲကောင်းကြီးသည် စစ်ဝတ်တန်ဆာကို ဖျက်ဆီးလိုက်သကဲ့သို့ ထို့အတူ မိမိသန္တာန်၌မွေ့လျော်တော်မူသော ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် မိမိသန္တာန်၌ အဖန်ဖန်ဖြစ်သောကိလေသာကို ဖျက်ဆီးတော်မူပြီ။
#လင်္ကာ ။ ။ မုနိ ထွဋ်တင် ဘုရားရှင်သည် များဖြင်အချိုး အမျိုးမျိုးဟု ကောင်းဆိုးနှစ်ပြင် ပေးစွမ်းအင်ကို ချိန်ခွင်ပမာ ဉာဏ်ပညာဖြင့် ကောင်းစွာလှလှ ချိန်၍ရသည့် တုလမည်ငြား ကာမာဝစရကံ တရားကိုလည်းကောင်း ချိန်ခွင်ပမာ ဉာဏ်ပညာဖြင့် ကောင်စွာပိုင်ပိုင် မချိန်နိုင်မှု အကြောင်းပြု၍ အတုလမည်ငြား မဟဂ္ဂုတ်ကံတရားကိုလည်းကောင်း ။မဂ် အရဟတ္တ ရတုန်းကပင်လုံးဝမငဲ့ စွန့်လွှတ်ခဲ့၍ တကယ့်စစ်ပွဲ နိုင်အောင်နွှဲသည့် သူရဲခေါင်အုပ် စစ်ဗိုလ်ချုပ်သည် ဖွဲ့တုပ် စစ်ဝတ် အားလုံးချွတ်သို့ ဝဋ်ကိလေသာ အဖြာဖြာကို ကောင်းစွာ ဖျက်ဆီး အားလုံးပြီးသည် …..အေးကြီး အေးရပြီ တကား။
မြတ်စွာဘုရား ဥဒါန်းကျူးသလိုပဲ မာရ်နတ်ကလည်း ပျော်ပြီးထွက်သွားတယ်။ဒီ ၃လအတွင်းမှာ အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့
အရှင်မောဂ္ဂလာန် အဂ္ဂသာဝကကြီး ၂ပါးရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြပါတယ်ည အရှင်မောဂ္ဂလာန်
ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုခင် အခါတပါးကတစ်ကိုယ်တည်း နေနေတုန်း မာရ်နတ်က ဝမ်းထဲကို ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်တယ်။
မထေရ်မြတ်ဝမ်းက မသာမယာဖြစ်လာလို့ အစာအာဟာရကြောင့်လားဆိုပြီးလမ်းထလျှောက်တယ်။ တန်ခိုးတော်နဲ့လည်း ကြည့်တယ်။ဒီတော့မှ မာရ်နတ်ဝင်နေတာသိပြီး မာရ်နတ်ကို ထွက်ခိုင်းတယ်။မာရ်နတ်က ငါ့ကိုမြင်သွားပြီဆိုပြီး ဝမ်းထဲက ထွက်လာရတယ်။တန်ခိုးပြင်းထန် အရှင်မောဂ္ဂလာန်ရဲ့စကားကို အာခံဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး။
အပြင်ထွက်ပြီးခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ကိုယ်ဖျောက်ရပ်နေတယ်။အရှင်မောဂ္ဂလာန်က မင်းကို ငါမြင်ရသေးတယ်လို့ပြောပြီး
ဒီမယ်မာရ်နတ် ငါလည်း အရင်ကမာရ်နတ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ဒီတော့မာရ်နတ် စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ငါ့ရဲ့နာမည်က အဲ့ဒီတုံးက ဒုဿီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တုန်းက ငါ့နှမဟာ အခု မင်းအမေပဲ။ဒီတော့မင်းနဲ့ငါဟာ တူအရီးတော်တယ်။
ဒီလိုပြောလိုက်တော့ မာရ်နတ် သူ့ဦးလေးမှန်းလည်းသိသွားရောနှလုံးသားက နူးညံ့ပျော့ပြောင်းသွားတယ်။ဒီအချိန်မှာမှ မထေရ်မြတ်က ငါမာရ်နတ်ဖြစ်ခဲ့တုန်းကလည်းဘုရားနဲ့ သံဃာတွေကိုစော်ကားခဲ့လို့ စုတိပြတ်ကြွေသေလွန်တဲ့အခါအဝိစိငရဲကို ကျဆင်းခံခဲ့ရတယ်။ မင်းလည်း ဘုရားနဲ့ သံဃာတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှားနှောင့်ယှက်နေဦးမယ်ဆိုရင် ငါ့တုန်းကလိုပဲအပယ်ကျလိမ့်မယ်လို့ ရှင်းပြလိုက်တယ်။
မာရ်နတ် အသိတရားဝင်သွားတယ်။သူဒီအတိုင်းဆက်သွားရင် ငရဲကျမှာလည်းကြောက်လာတယ်။သူမှားခဲ့သမျှကိုလည်း နောင်တရလာတယ်။သတ္တဝါတွေ သံသရာဝဋ်က မလွတ်အောင်သူကြိုးစားခဲ့တာတွေကိုနောင်တရပြီး အရှင်မောဂ္ဂလာန်ရဲ့တရားတိုတိုလေးနဲ့ မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်ရလောက်ပါရဲ့နဲ့ သာဝကဗောဓိဉာဏ်မယူတော့ပဲ။သတ္တဝါတွေကိုပါ သံသရာဝဋ်က ခေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ သမ္မာသမ္ဗောဓိဆုကို ပန်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူနေတဲ့ ပရနိမ္မိတဝဿဝတီနတ်ပြည်ကို ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပါရမီပေါင်းများစွာဖြည့်ကျင့်ပြီး လောကသတ္တဝါတွေကို ဘုရားတစ်ဆူအနေနဲ့ချေချွတ်ပါလိမ့်ဦးမယ်။လက်ရှိတော့ ဝဿဝတီနတ်ပြည်မှာပါ။
ဘုရားကမာရ်နတ်ကို မနှောင့်ယှက်အောင်ချုပ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့တစ်ခုခု မလုပ်သလဲကို သိလောက်ပါပြီ။သူ့ဦးလေးဟောင်းက ဆုံးမမှ ရမှာကြောင့်ကတစ်ကြောင်းတန်ခိုးနဲ့ဆုံးမရင် မာစ်နတ်က မနိုင်မှန်းသိလည်း သူချကိုယ်ချကွာဆိုပြီးပြန်ချနေရင် အကျိုးယုတ်မှာ စိုးတာကြောင့်ကတစ်ကြောင်း၊ဘုရားဆုပန်မယ့် ဆန္ဒဖြစ်ဦးမယ့် ဥပနိဿယကို မြင်တာက တစ်ကြောင့်၊စတာတွေကြောင့် အစောပိုင်း နှောင့်ယှက်သမျှကို မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ ဥပေက္ခာတွေနဲ့သည်းခံခဲ့တာပါ။
၄ ရဲ့ အဖြေ ပြီးပါပြီ။
မာရ်နတ်ကိုအရှင်မောဂ္ဂလာန်ဆုံးမနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အရှင်ဥပဂုတ်ဆုံးမတယ်ဆိုတာလုံးဝ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က အရှင်ဥပဂုတ်ဆိုတာမဟာယာန အနွယ်ဝင် စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။
၅ ရဲ့ အဖြေ ပြီးပါပြီ
တစ်ခါက စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီးကို ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့ နတ်တစ်ပါးက လာလျှောက်ဖူးတယ်။အရှင်ဘုရား အာယုသခါင်္ရလွှတ်ပါတော့ ဘုရားတဲ့ဆရာတော်ကြီးက မလွှတ်ဘူးကွာဆိုပြီးငေါက်ထုတ်လိုက်တော့သတ္တဝါတွေတော့ အကျွတ်တရားရကြလိမ့်ဦးမယ်ကွာဆိုပြီးစိတ်ပျက်လက်ပျက် ပြန်သွားတယ်တဲ့။
ဆရာတော်ကြီးဘေးနားက တပည့်တွေက အဲ့ဒါမာရ်နတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ဆရာတော်ကြီးက အဘိညာဉ်နဲ့ လိုက်ကြည့်ပြီးပြန်ပြောတယ်။မာရ်နတ်မဟုတ်ဘူးကွ။ အောက်ကနတ်သေးနတ်မွှားလေးပါပဲမာရ်နတ်ကြီးက လိမ္မာနေပါပြီတဲ့။
(၁) မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ရဲ့ နောက်ဆုံးဆယ်လမြတ်ဗုဒ္ဓ
(၃) ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော်ရဲ့ ဇိနတ္ထပကာသနီ
(၄) တည်တောဆရာတော်ရဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုင်ရာအမေးအဖြေများ
(၆) ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် တက္ကသိုလ်အဘိဓမ္မာပေါင်းချုပ်
ရေးသားပူဇော်သူ >> အကုသလပုတ္တနှလုံးသား အာဟာရ